Tamin’ny Tsingerintaona Faha-45 Niverenan’i Okinawa Tao Japan, Manohitra Ny Fijoroan’ny [Tafika] Amerikana Ao Aminy Ny Vahoaka · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Jolay 2017 4:58 GMT
“Olona manangana ny afisy ‘Aza manaiky hitolo-batana mihitsy’ nandritra ny fihaonambe fanoherana ny famindran-toerana an'i Henoko tao amin'ny Kianjabe Naha tao Okinawa.” Saripikan'ny mpisera Flickr RyuFilms. Lisansa Sary: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0).
Ny 15 May 2017 no ankalazana ny tsingerintaona faha-45 namerenan'i Etazonia an'i Okinawa amin'i Japan. Niavaka tamin'ny fihetsiketsehana tao Okinawa izay manohitra ny fanamboarana toby Amerikana ankehitriny ao amin'ny helo-dranomasina somary madio mangalahala ny volana Mey, misy ny tahotra fa hanasarotra ny fihetsiketsehana ny lalàna vaovao manohitra ny tetidratsy vao nolaniana tao Japan noho ny fisian'ireo Amerikana ao amin'izany faritra izany. Mitohy ny fihetsiketsehana manohitra ny fisian'ny miaramila Amerikana ao Okinawa, ary zara raha nanintona ny tany ivelan'ny faritra.
Taorian'ny faharesen'i Japana tamin'ny Ady Lehibe Faha-2, notantanin'i Etazonia hatramin'ny taona1972 i Okinawa. Nitarina toy ny toby miaramila Amerikana tao Pasifika Andrefana izany; na dia mandrafitra ny 0.6% ny faritra Japan monja aza, ahitana fotodrafitrasa miaramila Amerikana maherin'ny 70% i Okinawa. Mitàna ny 18% farafahakeliny, ny nosy lehiben'i Okinawa ny toby miaramila Amerikana.
Lova naharitra hatramin'ny taona 1972 ny toby, fotoana nilàn'i Etazonia fotodrafitrasa hanohanana ny adiny tamin'i Vietnam Avaratra. Nanomboka tamin'ny taona 1972, amin'ny ankapobeny, ny fisian'ny toby sy ny tafika Amerikana ao Japana dia voamarin'ny Fifanekena momba ny Satan'ny Tafika (SOFA) sy ny Fifanekem-piarahamiasa sy Fiarovana eo amin'i Etazonia sy Japana, fantatra ao Japana amin'ny anarana hoe Anpo joyaku (安保条約) na Anpo (安保).
Ny faritra miloko mena dia mampiseho ny bases in Okinawa. Sary avy amin'i Keiko Tanaka, mampiasa ny image from Wikipedia.
Na dia manome tombontsoa ara-toekarena ho an'ny mponina ao amin'ny prefektiora sahirana ao Japana aza ny fisian'ny miaramila Amerikana, miteraka tabataba lehibe ao amin'ny nosy feno olona ny toby ary mibahana toerana be loatra. Nisy ny ezaka natao nandritra ny taona maro mba hamindràna ny toby any amin'ny toeran-kafa.
Niteraka fihetsiketsehana vaovao manohitra fanamboarana toby vaovao ny tsingerintaona faha-45 nanakambanana an'i Okinawa tamin'i Japana.
Tamin'ny taona 2013, nanasonia fifanekena ny praiminisitra Shinzo Abe sady governora taloha tao Okinawa mba hanamboatra toby miaramila Amerikana vaovao ao amin'ny Helo-dranomasina Henoko, faritra somary madio mety ho ravan'ny toeram-panariam-pako mba hanorenana ny fotodrafitrasa. Niteraka fihetsiketsehana mitohy sy hetsika tsy fankatoavan'ny sivily izay nipoitra fohy tamin'ny vaovaom-pirenena izany fanapahan-kevitra izany, tamin'ny fotoana indrindra nankalazàna ny faha-45 taona niverenan'i Okinawa teo ambanin'ny fiandrianam-pirenena Japoney.
Araka ny resadresaka niarahana tamin'ny ben'ny tanànan'i Henoko teo aloha, nifototra hatrany tamin'ny fifanekena ny fampiasana ny tany ho an'ny miaramila fa afaka mampiasa ny tany ihany koa ny mponina ao an-toerana. Saingy efa nosorohan'ny toby vaovao izany fifanekena izany.
Tamin'ny volana Aprily 2017, nanomboka ny asa fanotofan-tany ny ampahan'ny Helo-dranomasina Henoko, niteraka fihetsiketsehana teo amin'ny vavahady fidirana ao amin'ny toerana. Nanao famoretana tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana izay manohitra ny fanamboarana ny toby ny polisy Japoney.
Mitohy ny famoretana tsy ara-drariny atao amin'ireo mpanao fihetsiketsehana manao sit-in ao amin'ny vavahadin'i Henoko, izay manakana ireo fiara tsy hiasa.
Nisy nijery efa ho an'arivony ny lahatsary iray nivoaka tao amin'ny Facebook, izay mampiseho ny fihetsika tafahoatra ataon'ny polisy tamin'ny fihetsiketsehana. Nampidirin'ilay “mpikatroka mpanao rap” Ogesa Tao tao amin'ny Youtube ny lahatsary, ary nandefa sary sy vaovao farany momba ny fihetsiketsehana tao amin'ny kaontiny Twitter ihany koa izy, arahana tononkalo indraindray,
Satria kivy amin'ity firenena ity aho
Raha mbola misy kivy tahaka izany ihany koa
Ho velona ny fanantenako
Izany no manda faran'ny demaokrasia
Ny ankamaroan'ny fihetsiketsehana tamin'ny volana Mey lasa teo dia noho ny fanapahan-kevita hanototra ny ampahan'ny Helodranon'i Henoko amin'ny vato mba hanamboarana lalana sy toeram-piantsonan'ny angidimby.
Tahaka izao no mitranga ao amin'ny toeram-panamboarana Henoko :
Kamiao efatra 10 taonina no mandraraka vato ao amin'ny ranomasina. Araka ny hitanao amin'ny sary, mamoaka vovoka be mandoto ny rano ny vato. Mamaky ny fon'ireo ekipan'ny lakana sy sambo ao amin'ny rano izay manohy ny fihetsiketsehan'izy ireo izany.
Tamin'ny volana Aprily, nangataka didim-pitsarana hanatsahatra ny asa ny governoran'i Okinawa, Onaga Takeshi, saingy tsy nahomby hatramin'izao. Tamin'ny faran'ny volana Mey, nangataka tamin'ny fomba ofisialy i Onaga mba hafindra ao Guam ny toby ao Henoko, fangatahana izay efa nataony tany aloha.
Mbola maneho ny ahiahiny amin'ny fanorenana ny tobin'i Henoko ihany Atoa Onaga, governoran'i Okinawa, mbola iangaviany ny hanombanana indray ny drafitra, sy ny hamindrana ny toby ho ao Guam ihany koa.
Raha mbola hitohy ny hetsi-panoherana, dia misy ny tahotra amin'izay mety ho vaikan'ny hery ampiasain'ny polisy hanakanana izany. Vao nandany tamin'ny faran'ity volana mey ity ny lalàna iadiana amin'ny fanaovana teti-dratsy ahafahan'ny polisy mametraka ho ao ambany fanarahamaso ny vondrona tiany araha-maso indrindra i Japana.
[Sorabaventy sy fanazavana amin'ny Twitter] Atsaharo ny fanotofana ny Hoalan'i Henoko! Foano ny lalàna iadiana amin'ny tetidratsy. (Hetsika iraisaina ao Sapporo, Hokkaido).